नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघ्यो « Mechipost.com
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघ्यो
प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:५५
फिदिम । नेपालमा मङ्गलवार झण्डै तीन सय जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल संख्या दुई हजार एक सय नाघेको छ । सङ्क्रमितमध्ये आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
मङ्गलवार सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमध्ये काठमाण्डूमा कार्यरत चार स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अपराह्णसम्म विगत २४ घण्टामा २८८ जनामा कोभिड–१९ देखिएको बताएका हुन् ।
मङ्गलवारसम्मको स्थितिमा नेपालको कुल सङ्क्रमण सङ्ख्या दक्षिण एशियाली मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा भन्दा धेरै भएको छ । भुटानमा ४७ जना, श्रीलङ्कामा १,६४३ जना र माल्दिभ्समा १,८२९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।
भारतमा एक लाख ९९ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाकिस्तानमा ७६,३९८ जनामा, बांगलादेशमा ४९,५३४ जनामा र अफगानिस्तानमा १६,४९२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सातवटै प्रदेशका कुल ६१ जिल्लामा सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेशमा थप १० जनामा कोभिड–१९ पुष्टि भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा स्याङ्जाका पाँच र पर्वतका पाँच जनामा भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
विगत २४ घण्टामा प्रदेश नं २ मा १२० जना व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । रौतहटमा ७४ जना, सर्लाहीमा २१ जना, सिराहामा १७ जना, धनुषामा चार जना, महोत्तरीमा दुई जना, सप्तरी जिल्लामा एक जना र बारा जिल्लामा एक जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा त्यहाँ ६४ जनामा कोभिड–१९ भएको पुष्टि भएको छ । तीमध्ये सुर्खेतमा २७ जना, दैलेखमा नौ जना, सल्यानमा १८ जना र अछाममा १० जना रहेको बताइएको छ । सङ्क्रमितहरू विभिन्न उमेर समूहका भए पनि अधिकांश युवा र पुरुष छन् ।
मन्त्रालतका अनुसार थप ४५ जना कोरोनाभाइरसमुक्त भएर अस्पतालबाट बिदा भएका छन् । यससँगै निको हुनेको संख्या २६६ पुगेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३,४४० वटा परीक्षण गरिएको थियो ।
अहिले देशभरि १,४५,३७५ जनालाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका व्यक्ति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । (बीबीसी नेपालीाट)
भाइलाई हराउँदै दाजु वडाध्यक्षमा निर्वाचित
इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका मनोहरि खड्का निर्वाचित भएका
डोकोबाटै भोट दिएर अस्ताए खड्का￼
जाजरकोट । जाजरकोटको जुनिचादे गाउँपालिका ४ का ७४ वर्षीय सार्के खड्काको शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनमा
प्रहरीको गोली लागेर उदयपुरमा एक जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते
उदयपुर । मतदान केन्द्र सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कटारी नगरपालिका–१० सोरुङ्गछबिसेमा शुक्रबार एक
जनप्रतिनिधि छनोट गर्न मतदान सुरु
फिदिम । आफूले खोजेको र रोजेको जनप्रतिनिधि छनोट गर्न देशभर एकैसाथ स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान